'डिप्रेसनमा जाँदा योग मेरो साथी थियो'
आईतबार, असार ७, २०७७ ०१:२२
प्रकाशित: आईतबार, असार ७, २०७७ ०१:२२
काठमाडौं। म सानैदेखि योग गर्थें। आमा योगमा पोख्त भएका कारण हामीलाई उहाँले घरमै योग सिकाउनुहुन्थ्यो। आमाले मेरो छोरीलाई पनि योग सिकाउनुहुन्छ।
आमा अफिसियल योग टिचर त होइन, तर आफ्ना सन्तानलाई कसरी स्फूर्त राख्‍ने भनेर उहाँले हामी पाँच छोराछोरीलाई योग सिकाउन थाल्नुभयो। मैले योग गर्न थालेको तीन दशकभन्दा बढी भयो। यसको पूरा जश आमालाई दिनुपर्छ।
जीवनमा कस्तो मोडबाट गुज्रिइएको हुन्छ, त्यही अनुसारको योगासन गर्ने गरेको छु। श्‍वासप्रश्‍वासको समस्या देखियो भने प्राणायाममा बढी केन्द्रित हुन्छु।
शरीरमा शक्ति कम भएजस्तो लागे वा कमजोरी भएको बेला कुण्डलिनी योगासन गर्छु। कसैका कारण तनावमा परिएको छ भने पनि यही कुण्डलिनी योगासन गर्छु।
कुण्डलिनी आसनले सबै कुरालाई ठीक ठाउँमा ल्याउन ठूलो भूमिका खेल्छ। हाम्रो ढाडमा हुने विभिन्‍न शक्ति केन्द्रलाई कुण्डलिनी योगासनले ठीक ठाउँमा ल्याउन मद्दत गर्छ। यो मेरो निकै मन पर्ने योगासन हो। नकारात्मक कुरालाई सकारात्मकमा परिणत गर्न पनि कुण्डलिनी योगासनले सहयोग गर्छ।
मानिसको जीवनमा विभिन्‍न घटना भइरहेका हुन्छन्। त्यस्ता घटनासँग कसरी डिल गर्ने? कसरी समाधान गर्नेजस्ता विषयमा योग महत्वपूर्ण हुन सक्छ।
आजकल खानेकुरामा रसायन तत्व बढिरहेको छ। त्यसले गर्दा हाम्रो शरीरलाई चाहिने आवश्यक तत्व रसायनयुक्त भइरहेका छन्। त्यसलाई नियन्त्रणमा लिन तथा त्यसले पार्ने प्रभाव कम गर्न पनि योगको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
म ३५ वर्ष पुग्न लागेकी छु। तर, अहिले पनि धेरैले तपाईं कसरी यति धेरै इनर्जेटिक हुनुभयो भनेर सोध्नुहुन्छ। उहाँहरूलाई दिने सीधा र छोटो जवाफ भनेको योग नै हो।
आजकल जीवन चलाउन निकै गाह्रो छ। सामाजिक सञ्जालमा छिर्नेबित्तिकै धेरैले विभिन्‍न प्रगति गरिरहेको देखिन्छ। त्यसपछि आफ्नो मनमा चिन्ता पैदा हुन्छ। दिमागमा अनेकन कुरा आउन थाल्छन्। त्यसपछि आफूले आफैंलाई नियन्त्रणमा राख्‍ने कुरा कम्ता चुनौतीपूर्ण हुँदैन। तर यसका लागि पनि योगले सहयोग पुर्‍याउँछ।
म आफैं जीवनमा समस्यामा परेका बेला योगमै केन्द्रित गर्छु। त्यसबाट समाधान पनि मिलिरहेको छ। म जब डिप्रेसनमा गएकी थिए, त्यो बेला पनि योगले नै मलाई निकै राहत मिलेको थियो। खासमा समस्यामा पर्दा योग मेरो साथी बन्‍ने गरेको छ।
योगले हामीलाई आत्मनिर्भर बनाउन सहयोग गर्नुका साथै शरीर र मनलाई नियन्त्रणमा लिने शक्ति प्रदान गर्छ। मन र शरीर सधैं सक्रिय राख्‍नुपर्छ, जुन सबै कुरा योगबाट पाइरहेकी छु।
महामारीको बेला योग महत्वपूर्ण बन्‍न सक्छ
योग भनेको तनाव, डिप्रेसनजस्ता समस्याबाट पार लगाउन सिकाउने माध्यम हो। क्वारेन्टाइनमा बस्ने वा संक्रमण पुष्‍टि भएका अथवा संक्रमणको खतरामा रहेका सम्पूर्ण मानव जातिलाई आजकल साझा चिन्ताले सताउने गरेको छ। अब के हुने हो? मरिने पो हो कि? आफन्त, परिवार र चिनजानकाको के होला?
यस्ता साझा चिन्ताबाट पिरोलिएकालाई योगले एकदमै राम्रो गर्छ। त्यसरी क्वारेन्टाइनमा बसेका वा अरू चिन्तितहरूलाई योग गराउन सकियो भने शारीरिकदेखि मानसिक समस्या पनि कम गराउँछ।
म बिहान ५ बजे उठ्छु। त्यो मेरो सधैंको रुटिन हो। त्यसका लागि मैले केही गर्नैपर्दैन। निद्रा आफैं खुल्छ। बिहान उठेर योग नै हो गर्ने भनेको। घरमै योग गर्ने हो। कुनै कुनै बेला बाहिरतिर शिविर लागेको छ भने त्यता पनि जान्छु।
हामीसँग बिहान प्रशस्तै समय हुन्छ। मेरो त समय नै हुँदैन भन्‍ने धेरै भेटिन्छन्। तर, मलाई लाग्छ उनीहरू नचाहिने चिजमा बढी केन्द्रित हुन्छन्। त्यसैले समय निकाल्न सक्दैनन्। सबैभन्दा पहिला आफ्नो स्वास्थ्यको ख्याल गर्नुपर्छ। त्यसका लागि योग नै सबैभन्दा उत्तम हो।
म एकदमै आध्यात्मिक मान्छे हो। त्यसमा पनि मैले हिजोआज शिव भगवानलाई एकदमै मान्छु। कैलाश पर्वतमा बसेर योग बनाउनुभएकै शिवजीले हो। मलाई शिव भनेको वायुमण्डलमा हुने कालो तत्व हो जस्तो लाग्छ। योग गर्दा म यस्तो ध्यान मुद्रामा पुग्छु कि अद्भूत ठाउँहरूबारे जानकारी लिने, राम्रो गर्न मन लाग्ने जस्ता कुरा बारे सोचिरहेकी हुन्छु।
म्युजिक भिडिओ छायांकनको तयारी
अचेल म म्युजिक भिडिओ, नाटक तथा चलचित्रको काममा लागिरहेकी छु। तर, लकडाउनका कारण सबै डामाडोल भयो। अर्को साता मेरो एउटा म्युजिक भिडिओको छायांकन हुँदैछ।
योगले नराम्रो कुरालाई पनि पोजिटिभ हिसाबले हेर्न सिकाउने रहेछ। बाढी आयो भने पनि थाम्न सकिन्छजस्तो लाग्छ। जुन सकारात्मक कुरा योगले नै दिएको हो।
सानो छँदा हाँसीखेली मजाक गरेरै सिकेको योगले अहिले आएर मेरो जीवनमा काम गरिरहेको छ।
हिजोआज योग विश्‍वव्यापी भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा योग टोलटोलमा सिकाउनेदेखि लिएर इन्टरनेटको माध्यमबाट पनि जान्‍न सकिन्छ। यसको लागि पतञ्जली, योगमान्डुलगायतले ठाउँ-ठाउँमा शिविर गर्दै आएका छन्। तिनीहरूबाट योग सिकेर जीवनमा आउने सम्पूर्ण समस्याबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ।
(अभिनेत्री तथा योग प्रशिक्षक उषा रजकसँग देखापढीका कृष्‍णसिंह धामीले गरेको कुराकानीमा आधारित।)